Soo dejisan 4shared Desktop 4.0.14.27379 – Windows – Vessoft
WindowsInternetkaWadaag wadaaga4shared Desktop
4shared Desktop – software ah inay si fudud u helaan iyo maarayn faylasha in lagu keydiyo daruur ka 4shared. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay dardar habka dajinta faylasha in aad xisaabta iyo dhigaysa mid u fudud. 4shared Desktop u saamaxaaya in la abuuro gal ah ku wadid aad u adag iyo dar faylasha in aaladood doonaa gal ah ku server ah. Software aad u ogolaataa isticmaalka caadiga ah ee faylasha, kaas oo la gaaro dejinta fasax u helaan dadweynaha iyo waxay bixisaa fursad lagu ilaaliyo faylasha sir ah. 4shared Desktop uu leeyahay shaqo ah .Wadashaqayntaas si toos ah u dhexeeya kombiyuutarada kala duwan ee dowladda hadda jirta xogta.
Maamulka file Easy la keydiyo daruur
Isticmaalka Common faylasha
Ka ilaali faylasha aad sir ah
.Wadashaqayntaas Automatic u dhexeeya kombiyuutarada kala duwan